Maalgashadayadu waxay ka dhigeysaa McKnight Foundation mulkiilaha qayb ka ah shirkado badan oo Maraykanka ah iyo kuwo caalami ah, oo naga dhigaya in aan saameyn ku yeelano dhaqanka shirkadaha. Istaraatijiyadaan isbeddelka kordhinta waxaa lagu magacaabaa maalgelinta maalgashiga-hagaajinta waxa aad leedahay. Dunida adduunka waxaa jira shabakad sii kordheysa oo ku hawlan, maalgashadayaasha hormoodka ah oo isticmaalaya trillions of dollars si loo dhiso dhaqaale hufan, dhaqaale waara.
Hagaajinta waxa aan leenahay
Caqabadda: Macluumaadka qulqulka aqalka dhirta aan la aqoon
McKnight waxay ku yaboohday $ 100 malyan oo ah sanduuqa xisaabinta ee hoos yimaada shirkadaha hoos yimaada gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo oo ka badan kuwa isku Istaraatijiyadda Wax-qabadka Carbon. Si kastaba ha noqotee, dhammaan shirkadaha ma soo sheegaan, markaa waxaan inta badan ku tiirsannahay xogta la qiyaasay.
Xalka: Codso xog fiican
Sannadka 2015 waxaan ayaa u qoray in ka badan 170 shirkadood ee qaybaha kaabayaasha ah si ay u ogaadaan inaan u baahanahay macluumaad wanaagsan oo ku saabsan go'aan qaadashada maalgashiga. Sannadkii 2016 waxaan ku biiray laba aasaas oo sidoo kale taageera suuqyo hufan, Sanduuqa Rockefeller Brothers iyo Nathan Cummings Foundation.
Sanadka 2018, McKnight ayaa ku biiray Waxqabadka cimilada 100+. Mid ka mid ah mowqifka aasaasiga ah ee ka mid ah 225 ka qaybgalayaasha maal-gashiga, waxaanu wadahadal la yeelan doonaa mid ka mid ah 100-kan ugu weyn caalamka ee gaaska aqalka gaaska si loo wado isbeddel. Illaa iyo hadda, in ka badan $ 26.3 trillion oo hantida hoosta maamulka ayaa saxiixay hindisaha.
Caqabadaha: Shirkadu waxay la kulmaan khataraha deegaanka iyo deegaanka
Caadi ahaan, dhiirrigelinta suuqyada ayaa laga yaabaa inay hoggaamiso qaar ka mid ah madaxda shirkadaha inay diirada saaraan dib u dhiska dhaqaale ee mudada gaaban ayna iska indho-tiraan khataraha iyo muddooyinka muddada dheer ee la xidhiidha bay'ada, shaqaalaha, ama bulshooyinka ay ka shaqeeyaan.
Xalka: Codbixinta saamileyda
Xildhibaanadu waxay soo jeedinayaan soo jeedinada shirarka sannadlaha ah ee shirkadaha si ay u qabtaan caqabadaha ganacsiga sida dejinta bartilmaameedyada hoos u dhigista gaaska korontada ama kor u qaadida mushaarka fulinta waxqabadka deegaanka. McKnight guud ahaan codadka ayaa ku faani doona soo jeedinta saamileyda Deegaanka, Bulshada iyo Maamulka (ESG) arimaha lagu dhiirigelinayo fikirka waqti-dheer ee shirkadaha. Dhammaan xisaabyadayda "xisaabeedyada gaarka ah ee la maareynayo" (xisaabaadka codbixinta ee aan xakameyneyno), waxaan ku tiirsanahay Adeegyada Hay'adda Hantidhawrka oo isticmaalaan Tilmaamaha Cod bixinta SRI Proxy.
Sanadkii 2017, McKnight wuxuu weydiiyay maamulayaashu inay maalgashi ku sameeyaan Shirkadda Koonfureed si ay u tirtiraan codadka maaraynta madax-bannaan oo ka soo horjeeda qorshaha magdhowga ee shirkadda US Department of Energy, Company Southern. Hawlwadeennada ayaa si baaxad leh loogu abaalmariyay abaal marin ballaadhan inkastoo ay xadidan yihiin oo ay qoreen mashaariicda aan mashaariicda ahayn ee aan mashaariicda ahayn ee kharashka saamileyda ah. Ugu yaraan mid ka mid ah maamuleyaasheena ayaa bedelay jagada sanduuqa oo dhan.